“गोकुल बाँस्कोटालाई पबित्र स्कुलको शिलान्यास कस्तो हातले हुँदैछ।भनी काभ्रे बाट लखेट्न खोजियो हेर्नू होस।
November 25, 2020 adminLeaveaComment on “गोकुल बाँस्कोटालाई पबित्र स्कुलको शिलान्यास कस्तो हातले हुँदैछ।भनी काभ्रे बाट लखेट्न खोजियो हेर्नू होस।
काठमाडौँ – गोकुलबिरुद्ध पनौतीमा पर्चा पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सोमबार पनौतीमा विद्यालयको उद्घाटन गर्नुअगावै स्थानीय नेकपा कार्यकर्ताले भ्रष्ट आचरणको भण्डाफोर गरौं शीर्षकको पर्चा छ्याप्छ्याप्ती बाँडेका छन् ।
बाँस्कोटा प्रकरणमा अख्तियार नचुकोस् भन्ने सबै को चाहाना ।।
‘संकलित प्रमाणबाट आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने’ देखाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १९(१२) अनुसार बाँस्कोटाविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । घूस मोलमोलाइ गरिरहेको अडियो नै उपलब्ध हुँदा पनि मुद्दा चलाउने गरी प्रमाण नभेटिने हुन सक्दैन ।
पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, आज मंसिर १० गते बुधबार ,यस्तो छ तपाईको राशिफल !
अर्को बैंकको एटिएम प्रयोग गर्नुहुन्छ? अब बन्यो शुल्क लाग्ने नियम !,,,,,हेर्नुस् ।